Iindaba-kwiNtengiso yeHlabathi ePhakamileyo ye-Polyethylene Market (2021 ukuya ku-2026) -Imikhwa yeShishini, uKwabelana, ubungakanani, ukukhula, ithuba kunye noqikelelo
HDPE Soket Fusion Lokulinganisa
HDPE ezinqeni Fusion Lokulinganisa
IHDPE Electrofusion Lokulinganisa
IHDPE Siphon Draign Lokulinganisa
Ukucinezelwa kwe-PP kufanelekile
PPR / PEX / Pipe & Lokulinganisa
Socket Fusion Umatshini
Iplastiki ye-extrusion Welding Gun
Pipe yokulungisa uqinisa
Wamkelekile ku CHUANGRONG
Imarike ePhambili yePlastiki yeDynhe yeNtengiso (2021 ukuya ku-2026) -Imikhwa yeShishini, uKwabelana, ubungakanani, ukukhula, ithuba kunye noqikelelo
UDUBLIN, ngoMeyi 5, 2021 / PRNewswire / - The "Ukuxinana okuphezulu kwePolyethylene (HDPE) yentengiso: Imizi-mveliso yoShishino lweHlabathi, uKwabelana, ubungakanani, ukukhula, ithuba kunye noqikelelo 2021-2026 ″ ingxelo yongezwe UphandoAndMarkets.com's umnikelo.
Imarike ye-polyethylene ephezulu (HDPE) yemarike ifikelele kwixabiso le-US $ 70.4 Billion ngo-2020. Ukuxinana okuphezulu kwe-polyethylene, okanye i-HDPE, yiplastiki eyomeleleyo, eyomeleleyo ngokuphakathi enesakhiwo esine-crystalline ephezulu. Yomelele, ayibizi kakhulu kwaye inekhono lenkqubo ebalaseleyo. Iplastiki yeHDPE ineempawu ezininzi ezenza ukuba ibe yinto efanelekileyo yokupakisha kunye nokwenza izicelo. Inzima kune-polyethylene esemgangathweni, isebenza njengesithintelo esinamandla ngokuchasene nokufuma kwaye ihlala iqinile kubushushu begumbi. Kukuchasana nezinambuzane, ukubola kunye nezinye iikhemikhali. I-HDPE ayenzi zinto zingcolisayo ngexesha lokuveliswa kwayo okanye ngexesha lokusetyenziswa kwayo ngumthengi. Ngapha koko, iHDPE ayivuzi ziikhemikhali zinobungozi emhlabeni okanye emanzini. Ukujonga phambili, umpapashi ulindele ukuba imakethi ye-polyethylene (HDPE) ephezulu ukubonisa ukukhula okuphakathi kwiminyaka emihlanu ezayo.
I-HDPE ifumana usetyenziso kwizicelo ezininzi nakwimizi-mveliso apho ukunganyangeki ngamandla, amandla okuqina, ukufuma okuphantsi, kunye neekhemikhali kunye neempawu zokumelana nokubola ziyafuneka. Ngenxa yezi propati idla ngokusetyenziselwa ukuvelisa imibhobho yococeko njengoko inesakhiwo esomeleleyo seekhemikhali kwaye kulula ukuyilungisa. Ikwafumene ukuthandwa kuwo onke amashishini okupakisha njengoko isetyenziselwa ukuvelisa iimveliso ezahlukeneyo ezinje ngeebhotile zebhotile, izikhongozeli zokugcina ukutya, iingxowa, njlnjl. Ngaphezu koko, i-polyethylene yoxinaniso oluphezulu iye yaqinisekiswa njenge-polymer yokutya njengesiphumo ikwafumana usetyenziso kwishishini lokutya.
Ubume bokhuphiswano kwintengiso buye bavavanywa nabanye babadlali abaphambili yiChevron Phillips Chemical Company, iDynalab Corp., iDow Chemical Company, Exxon Mobil Corporation, iLyondellBasell Industries NV, INEOS AG, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Inkampani ye-SINOPEC Beijing Yanshan, i-PetroChina Inkampani ye-Ltd, i-Braskem, i-Reliance Industries Ltd., i-Formosa Plastics Corporation, i-Daelim Industrial Co Ltd., i-Prime Polymer Co. kunye ne-Mitsui Chemicals Inc.
Le ngxelo inika ukuqonda okunzulu kwimakethi ye-polyethylene ephezulu kakhulu egubungela yonke imiba ebalulekileyo. Olu luhlu lukujonga ngokubanzi kwintengiso ukuya kwiinkcukacha ezincinci zentsebenzo yeshishini, imikhwa yakutshanje, abaqhubi abaphambili beemarike kunye nemiceli mngeni, uhlalutyo lweSWOT, uhlalutyo lwemikhosi emihlanu kaPorter, uhlalutyo lweetyathanga, njl. Le ngxelo kufuneka ifundelwe oosomashishini, abatyali mali , abaphandi, abacebisi, iingcali zeshishini, kunye nabo bonke abo banalo naluphi na uhlobo lwesibonda okanye baceba ukuthengisa kwimarike ye-polyethylene ephezulu nangayiphi na indlela.
Umpapashi wenze neprojekthi kwintengiso ye-polyethylene (LDPE) esezantsi, ethe yanceda abathengi ukuba bakwazi ukuseta nokwandisa amashishini abo ngempumelelo.
Imibuzo ephambili iphendulwe kule ngxelo:
Izihloko eziphambili eziGutyungelweyo:
Usebenze njani kwimakethi ye-polyethylene ephezulu kakhulu ukuza kuthi ga ngoku kwaye iya kusebenza njani kule minyaka izayo?
Ibe yintoni ifuthe le-COVID-19 kwishishini le-polyethylene ephezulu yoxinaniso?
Zeziphi ezona ntengiso ziphambili kwingingqi kushishino lwe-polyethylene ephezulu kakhulu?
Zeziphi ezona nkqubo ziphambili zokuvelisa kushishino lwe-polyethylene ephezulu kakhulu?
Zeziphi ezona ndawo ziphambili zokutya kushishino lwe-polyethylene ephezulu kakhulu?
Ngawaphi amacandelo aphambili esicelo kushishino lwe-polyethylene ephezulu kakhulu?
Ngawaphi amanqanaba ahlukeneyo kwikhonkco lexabiso lentengiso ye-polyethylene ephezulu kakhulu?
Zeziphi izinto eziphambili zokuqhuba kunye nemiceli mngeni kwimarike ye-polyethylene ephezulu kakhulu?
Luyintoni ulwakhiwo lwemarike ye-polyethylene ephezulu kakhulu kwaye ngoobani abadlali abaphambili?
Lithini inqanaba lokhuphiswano kwimarike ye-polyethylene ephezulu kakhulu?
Yenziwa njani ingxinano ephezulu ye-polyethylene?
Ububanzi kunye nendlela yokusebenza
2.3.1 Oovimba abaPhambili
2.3.2 Imithombo yeSekondari
2.4 Uqikelelo lweNtengiso
2.4.1 Inkqubo yokuPhantsi
2.4.2 Indlela yokuSukela ezantsi
2.5 Indlela yokuqikelela
3 Isishwankathelo seSigqeba
4.3 Imikhwa ephambili yoShishino
Intengiso ye-5 yeHlabathi ePhakamileyo ye-Polyethylene Market
5.1 Amagqabantshintshi eMarike
5.2 Ukusebenza kweNtengiso
5.3 Impembelelo ye-COVID-19
5.4 Ukwahlukana kweNtengiso ngokweZondlo
5.5 Ukwahlukana kweNtengiso ngeSicelo
5.6 Ukwahlukana kweNtengiso ngokweNkqubo yeMveliso
5.7 Ukwahlukana kweNtengiso nguMmandla
5.8 Uqikelelo lweNtengiso
5.9 Uhlalutyo lweSWOT
5.10 Uhlalutyo lweKhonkco leXabiso
5.10.2 Uphando noPhuhliso
5.10.3 UkuThengwa kweeMpahla eziSetyenzisiweyo
5.10.4 Ukwenziwa kwemveliso
5.10.7 Ukuphela koSetyenziso
5.11 Uhlalutyo lweeMikhosi eziHlanu
5.11.2 Amandla eThethathethwano ngaBathengi
5.11.3 Amandla eThethathethwano naBaboneleli
5.11.4 IsiDanga soKhuphiswano
5.11.5 Isisongelo sabangeneleli abatsha
5.11.6 Isoyikiso saBabambeleyo
5.12 Uhlalutyo lwamaxabiso
5.12.1 Izalathi zamaxabiso aphambili
5.12.3 Uhlalutyo lomda
Ukwahlukana kweNtengiso ngeeMveliso zeMfuyo
6.1.1 Iindlela zentengiso
6.1.2 Uqikelelo lweNtengiso
6.2 Irhasi yendalo
6.2.1 Iindlela zentengiso
6.2.2 Uqikelelo lweNtengiso
6.3.1 Iindlela zentengiso
6.3.2 Uqikelelo lweNtengiso
Ukwahlukana kweNtengiso ngeSicelo
7.1 Blow Ukubumbela
7.1.1 Iindlela zentengiso
7.1.2 Uqikelelo lweNtengiso
7.2 Ifilimu noxwebhu
7.2.1 Iindlela zentengiso
7.2.2 Uqikelelo lweNtengiso
7.3 ziphene yokubumba
7.3.1 Iindlela zentengiso
7.3.2 Uqikelelo lweNtengiso
7.4 Umbhobho kunye noFuduko
7.4.1 Iindlela zentengiso
7.4.2 Uqikelelo lweNtengiso
7.5.1 Iindlela zentengiso
7.5.2 Uqikelelo lweNtengiso
Ukwahlukana kweNtengiso ngeNkqubo yokuThengisa
8.1 Inkqubo yesiGaba seRhasi
8.1.1 Iindlela zentengiso
8.1.2 Uqikelelo lweNtengiso
Inkqubo ye-8.2 edibeneyo
8.2.1 Iindlela zentengiso
8.2.2 Uqikelelo lweNtengiso
Inkqubo yokuSombulula isisombululo
8.3.1 Iindlela zentengiso
8.3.2 Uqikelelo lweNtengiso
Ukwahlukana kweNtengiso ngeNgingqi
9.1 Asiya Pacific
9.1.1 Iindlela zentengiso
9.1.2 Uqikelelo lweNtengiso
9.2 eMntla Merika
9.2.1 Iindlela zentengiso
9.2.2 Uqikelelo lweNtengiso
9.3.1 Iindlela zentengiso
9.3.2 Uqikelelo lweNtengiso
9.4 Mbindi Mpuma neAfrika
9.4.1 Iindlela zentengiso
9.4.2 Uqikelelo lweNtengiso
9.5 ILatin America
9.5.1 Iindlela zentengiso
9.5.2 Uqikelelo lweNtengiso
Inkqubo yokuThintela ukuPhela kwePolyethylene ePhakamileyo
10.1 Isishwankathelo seMveliso
10.2 Iimfuno zeMathiriyeli ekrwada
10.3 Inkqubo yokuLungisa
10.4 Impumelelo ephambili kunye nemiba yomngcipheko
11.2 Abadlali abaphambili
11.3 Iiprofayili zaBadlali aBalulekileyo
11.3.1 Inkampani yaseChevron Phillips Chemical
11.3.2 IDynalab Corp.
11.3.3 Inkampani yeDow Chemical
11.3.4 I-Exxon Mobil Corporation
11.3.5 ILyondellBasell Industries NV
11.3.7 Inkampani yaseSaudi yoShishino oluSisiseko (i-SABIC)
11.3.8 SINOPEC Inkampani yaseBeijing Yanshan
11.3.9 I-PetroChina Inkampani Ltd.
11.3.12 IFomosa Plastics Corporation
11.3.13 iDaelim Industrial Co Ltd.
11.3.14 Prime Polymer Co., Ltd.
Imbuyekezo Mitsui Chemicals Inc.
Ixesha Post: Jun-11-2021
Igumbi13, 15 / F, Isakhiwo1, isikwere seemayile ezili-9, indlela ye-jiancai eyi-39,
Emily UJim UAnnie Uvuyo